Oriọna Xiaomi Mi Bedside 2, nyocha ya na ọnụahịa yana atụmatụ | Akụkọ ngwa
Miguel Hernandez | 28/08/2021 15:00 | General, Nyocha
Ngwa ụlọ ejikọtara na Xiaomi aghọọla ewu ewu n'ihi mmekọrịta chiri anya n'etiti ịdị mma na ọnụ ahịa, njirimara nke ika na ngalaba ya niile. Banyere ọkụ nwere ọgụgụ isi, ọ nweghị ike ịdị obere, na oge a anyị na -ewetara gị otu n'ime ngwaahịa ya kacha ewu ewu.
Anyị na -elele Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, oriọna na -agbanwe agbanwe nke dakọtara na ndị na -enyere aka mebere dị iche iche. The Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 adịla na tebụl nyocha ma anyị ga -agwa gị ihe ahụmịhe anyị bụ na ngwaahịa a pụrụ iche na nke zuru oke.
2.1 Mmekọrịta na Amazon Alexa
2.2 Mmekọrịta na Apple HomeKit
3 Ntọala na arụ ọrụ
Ọgbọ nke abụọ Xiaomi Mi Bedside Lamp nwere ọmarịcha ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọ dị mfe imeghari maka ime ụlọ ọ bụla. O nwere ịdị elu nke sentimita 20 na obosara nke sentimita 14, kọmpat na ịdị arọ dị mfe nke na-ahụ na ọ nwere ike ịnye ọkụ na ụdịdị 360. Njikọ njikọ ọkụ bụ maka akụkụ azụ na akụkụ ihu ihe ahọpụtara nwere bọtịnụ atọ. Ị nwere ya na ọnụahịa kacha mma na Amazon ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ ya.
Matt na -acha ọcha plastik maka ntọala ya na ọcha na -acha uhie uhie maka mpaghara na -ahụ maka ịgbanye ọkụ. Ngwaahịa a dị mfe 'dabara' n'ime ime ụlọ dị iche iche, yabụ na anyị ekwesịghị ịrapara n'iji ya dị ka tebụl n'akụkụ àkwà.
Dị ka oge niile, ngwaahịa na-abịa na ntuziaka nwụnye ngwa ngwa dị mfe nghọta. Nke mbụ, anyị ga -ejikọ ọkụ eletrik wee gaa n'ihu tinye nkwụnye ọkụ Mi Bedside 2 na ọkụ eletrik. Na akpaghị aka, na -enweghị mkpa maka imekwu ihe, anyị ga -arụ ọrụ na ngwa Xiaomi Mi Home, dị maka gam akporo na iOS.
Ozugbo anyị banyere na akaụntụ Xiaomi anyị, ma ọ bụ anyị debara aha (dị mkpa) ma ọ bụrụ na anyị enweghị akaụntụ, anyị ga -pịa bọtịnụ "+" dị n'elu aka nri ihuenyo ahụ. N'ime sekọnd ole na ole, Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 nke anyị ka malitere ga -apụta.
Naanị anyị ga -enye gị netwọ Wi -Fi na paswọọdụ gị. Anyị na -adọ aka na ntị n'oge a na Mi Bedside Lamp 2 adabaghị na netwọkụ GHz 5. Mgbe ahụ anyị ga -agbakwunye ọnụ ụlọ n'ime ụlọ anyị yana njirimara n'ụdị aha. N'oge a, anyị nwere Mi Bedside Lamp 2 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke agbakwunyere, mana anyị ga -echeta na anyị nwere nkwekọrịta zuru oke na Amazon Alexa na Google Home, yabụ anyị ga -ejedebe ijikọ oriọna ahụ na ndị na -enyere aka mebere ọkacha mmasị anyị.
Mmekọrịta na Amazon Alexa
Anyị na -aga "Profaịlụ" na akuku aka nri ala, mgbe ahụ anyị ga -aga n'ihu na ntọala "ọrụ olu" wee họrọ Amazon Alexa, ebe ahụ ka anyị ga -ahụ usoro, nke bụ ihe ndị a:
Tinye ngwa Alexa gị wee gaa na ngalaba nka
Budata nka Xiaomi Home wee banye n'otu akaụntụ ahụ ị jikọtara na Ọdụ Ụkwụ 2 nke Xiaomi
Pịa na “chọpụta ngwaọrụ”
Igwe oriọna Xiaomi Mi n'akụkụ gị apụtalarị na ngalaba 'ọkụ' ka ị nwee ike ịhazigharị ihe ịchọrọ
Mmekọrịta na Apple HomeKit
N'oge a, ntuziaka dị mfe ịgbaso karịa nke anyị nyere maka njikọ na Amazon Alexa.
Ozugbo ịmechara ngalaba nhazi niile site na Xiaomi Home gaa ngwa Apple Home.
Pịa akara ngosi "+" ka ịgbakwunye ngwaọrụ
Nyochaa koodu QR n'okpuru ntọala oriọna ahụ
A ga -agbakwunye ya na sistemụ Apple HomeKit gị na akpaghị aka
Nke a, yana ndakọrịta na ụlọ Google, na -eme Mi Bedside Lamp 2 otu uru kacha mma maka ngwaahịa ego n'ahịa n'etiti oriọna mara mma.
Ntọala na arụ ọrụ
Ọ na -aga n'ekwughị na ekele maka njikọta nke ndị enyemaka Apple na Amazon dị iche iche, ị ga -enwe ike ịrụ ọrụ elekere ma ọ bụ ụdị mmezi akpaka ọ bụla ị chọrọ. Na mgbakwunye na nke dị n'elu, anyị nwere ngwa Xiaomi Home nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, ga -enye anyị ohere:
Gbanwee agba oriọna
Gbanwee agba nke ndị ọcha
Mepụta usoro agba
Gbanyụọ oriọna ma gbanyụọ
Otú ọ dị, n'oge a, anyị ga -elekwasịkwa anya na njikwa ntuziaka na -adịchaghị mkpa, N'ihi na n'eziokwu, ịbụ oriọna okpokoro n'akụkụ àkwà ọ dị mma na anyị nwere ọtụtụ nhọrọ na ekwentị mkpanaaka, mana otu n'ime ihe ndị a na -ejikarị eme ya bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga -abụ mmezi ntuziaka.
Maka nke a, anyị nwere sistemụ mmetụ n'etiti nke nwere ọkụ ọkụ LED ma na -enye anyị ohere ndị a niile:
Bọtịnụ dị ala ga -arụ ọrụ ịgbanye ma gbanyụọ oriọna n'ọnọdụ ọ bụla site na iji otu mmetụ.
Ihe mmịfe ahụ dị na mpaghara etiti ga -enye anyị ohere idozi ọtụtụ nchapụta nke dabara mkpa anyị yana nke na -enye nzaghachi dị mma.
Bọtịnụ dị n'elu ga -enye anyị ohere idozi ndò na agba:
Mgbe ọ na -enye ụcha ọcha, imetụ obere aka ga -enyere anyị aka ịgbanye agba dị iche iche nke agba a na -enye anyị site na oyi ruo ọkụ.
Ọ bụrụ na anyị emee ogologo pịa, anyị ga -enwe ike ịgbanye n'etiti ọnọdụ ọcha na ọnọdụ agba RGB
Mgbe ọ na -enye ọnọdụ ụcha RGB, obere pịa bọtịnụ dị n'elu ga -enyere anyị aka ịgbanye n'etiti agba dị iche iche
Nke a Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 na -eri 1,4 watts na ezumike na 9,3 watts na arụ ọrụ kacha, yabụ anyị nwere ike were ya dị ka “obere oriri”. Banyere ike ọkụ, anyị na -ahụ ihe zuru oke (yana ọtụtụ) 400 ọkụ maka oriọna n'akụkụ àkwà.
Echiche ikpeazụ m banyere Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 bụ na achọpụtara m na ọ dị mgbagwoju anya ịnye karịa maka ngwaahịa ị nwere ike zụta n'etiti euro 20 ruo 35 dabere na isi ahịa yana onyinye ndị akọwapụtara. Anyị nwere oriọna na -agbanwe agbanwe nke ukwuu, yana atụmatụ ị ga -atụ anya ya, ọ ga -esiri ike igosi na enweghị otu n'ime ụlọ ejikọtara.
Mi oriọna 2
Ihe na: 28 August 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 28 August 2021
Na -achọ ịmepụta akaụntụ Xiaomi
Ọdịiche ọnụahịa na isi ahịa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, nyocha ya na ọnụahịa yana atụmatụ